Ny "Sary an-tsary" an'i YouTube dia tonga amin'ny iOS | Vaovao IPhone
Ny "Sary an-tsary" an'i YouTube dia tonga amin'ny iOS
Toni Cortés | | Fampiharana iPhone
Toa hampihatra ny asan'ny «YouTube ihany izy amin'ny faranySary amin'ny sary»Amin'ny fitaovana iOS. Io dia hahafahanao mijery horonantsary misy ny fampiharana YouTube mihidy rehefa mizaha amin'ny Safari.
Hampiharina ao a tsikelikely. Nanomboka tany Etazonia izy io saingy nampanantena ny hampivelatra tsy ho ela ny fampiharana azy, na amin'ny mpampiasa manana fisoratana anarana Premium na tsy misy azy. Hiandry isika, avy eo.
YouTube vao avy namoaka fa hanomboka hampihatra ny fanohanana "Sary an-tsary" amin'ny rindranasa iOS, izay ahafahan'ny mpampiasa rehetra, na ny mpanjifa premium na tsy premium, hanidy ny fampiharana YouTube ary hanohy hijery ny lahatsarin'izy ireo amin'ny pop-up kely varavarankely
Vinavina ny olona fa tsy ho an'ny mpamandrika karama YouTube ihany io fampiasa vaovao io, fa androany kosa dia nandà izany ny orinasa. Ho fiasa ho an'ny mpampiasa rehetra. Vaovao mahafinaritra.
Handroso tsikelikely ny fampiharana an'io serivisy io. YouTube dia nanomboka tamin'ny Mpampiasa US, ary hitatra any amin'ny firenena maro izy ao anatin'ny andro vitsivitsy, mandra-pahatapitry ny fivoarany ho an'ny mpampiasa rehetra.
Azo antoka fa tena ilaina tokoa izany rehefa ampiharina ao iPadOS. Misaotra ny efijery malala-tanana ananan'ny iPads, ho azo ampiharina tokoa ny afaka mijery horonantsary YouTube ao anaty efijery pop-up miaraka amina fampiharana mihidy, raha manohy mijery Internet miaraka amin'ny Safari ianao.
Tsy takatra tanteraka ny antony tsy maintsy hametrahana azy tsikelikely. Fanavaozana fotsiny ny fampiharana izany, izay tsy misy ifandraisan'ny mpizara izay naelin'ny YouTube eraky ny planeta. Fa ny tena izy dia ho toy izao.
Noho izany dia hitandrina isika hijery ny fotoana hampiharana azy io amin'ny firenentsika, saingy toa efa izany raharaha andro. Ho hitantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ny "Sary an-tsary" an'i YouTube dia tonga amin'ny iOS
Ny iOS 15 dia manatsara ny asan'ny 'drag and drop' amin'ny alàlan'ny fampidirana sary sy lahatsoratra
Pokémon UNITE ho tonga amin'ny iPhone amin'ny volana septambra